MCDO Philippines ọ bụ halal? - zuru ike na mba ndị na-ekpo ọkụ
McDonalds niile bụ halal?
McDonalds ọ bụ Haram?
McDonalds McChicken ọ bụ halal?
Ọkụkọ KFC ọ bụ Halal?
Ọ bụ Halal McDonald na Pakistan?
Popeyes ọ bụ Halal?
Jollibee Italy ọ bụ Halal?
Gịnị kpatara na KFC abụghị Halal?
Taco Bell ọ bụ ezigbo?
Anụ ezi ọ bụ Halal ka ọ bụ haram?
Kọfị McDonald ọ bụ Halal?
Azụmahịa nri ngwa ngwa gụnyere. McDonalds, KFC, Agụụ Jacks, Red Rooster, Ụzọ ụgbọ oloko, Domino niile na-eji. akwụkwọ ikike halal ọkụkọ na cheese, n'agbanyeghị na ọtụtụ ụlọ ahịa anaghị enweta akwụkwọ ikike. … McDonalds na halal gbaara ezi àmà ụlọ ahịa ere ọbụna halal gbaara ezi àmà bottled mmiri.
McDonald bụ franchise nri ngwa ngwa kachasị ukwuu n'ụwa yana ndị ahịa nde 68 na-abanye n'ọnụ ụzọ ya kwa ụbọchị, gụnyere ndị Alakụba. … McDonalds' Na-ekwu n'ụzọ doro anya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ha abụghị akwụkwọ ikike halal, ha na-eme ka o doo ndị ahịa anya ka ha ghara ịtụ anya ihe ọ bụla ga-abụ halal.
N'ime afọ 12 gara aga, agbụ nri ngwa ngwa na-ere nri halal - Sanwichi Chicken McNuggets na McChicken - na naanị ụlọ oriri na ọṅụṅụ abụọ, ha abụọ dị na Dearborn, Mich., Obodo nwere ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị Alakụba.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 KFC ụlọ ahịa na mba ahụ na-enye ọkụkọ kwadoro halal, dị ka ọ na-eme gburugburu 75 - nke ise - nke Nando's. … (KFC na Nando's abụọ na-ekwukwa na ha na-ahụ na mgbe ha na-emepe ụlọ oriri na ọṅụṅụ halal ọhụrụ, na e nwere nke na-abụghị halal dị nso.)
McDonald's Pakistan kwusiri ike na ọ na-azụta ngwaahịa anụ niile sitere n'aka ndị na-ebubata mba ụwa na ntụkwasị obi yana a kwadoro ha 100% dị ka halal. … McDonald's kwuru halal asambodo na-egosipụta pụtara ìhè na ya ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ọkụkọ ngwaahịa si Mac Food Malaysia.
Nke a dị mkpa: Ị jụrụ: Kedu steeti na Malaysia nwere oke oke ibu?
NKWUKWU AHỤ EZI EZINỤLỌ ISLAM NA KỌMỤLI NTỤNYA NKE CANADA. Ebe niile na -edobe akwụkwọ anaghị adị mma? EE. A NA -EJIRI ANỤ HA AKWUKWU HA NA CANADA KWESỊRỊ HA.
Ọ dịghị, ọ dị nwute na ọ bụghị halal. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ọtụtụ nhọrọ anụ ezi ka nri ebe ahụ agaghị abụ halal.
Ekwupụtala na KFC 'ekwenyela na mberede' na ụlọ ọrụ UK niile na-enye ọkụkọ ahụ e gburu n'okpuru ebubo obi ọjọọ usoro Islam. Ekwuru na nkwupụta a na-abịa mgbe webụsaịtị KFC gosipụtara na ọtụtụ ụlọ ahịa KFC na UK abụghị Halal.
Taco Bell n'onwe ya na-ekwu na, "Ọ bụ ezie na anụ na ndị ọzọ na-ebubata ihe ndị anyị na-eji nwere ike ịbụ akwụkwọ ikike Halal, Ngwaahịa ndị a kwadebere na ụlọ oriri na ọṅụṅụ anyị abụghị kpọmkwem akwụkwọ ikike Halal. Biko rụtụ aka na nhọrọ ndị anaghị eri anụ maka nhọrọ menu nwere ike ime."
Kacha nkịtị atụ nke haram nri (na-abụghị halal) bụ anụ ezi. Ọ bụ ezie na anụ ezi bụ naanị anụ nke ndị Alakụba na-agaghị eri ya (Quran gbochiri ya, Surah 2:173 na 16:115) nri ndị ọzọ na-anọghị n'ọnọdụ ịdị ọcha ka a na-ewerekwa ihe rụrụ arụ.
Ọ dịghị ihe ọ bụla n'ime menu anyị bụ Halal. Ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ anyị anaghị ekwe ka anyị kewapụ ngwaahịa halal na ihe McDonald anyị na-eme mgbe niile ma ọ bụ na anyị enweghị ike hụ na ngwaahịa ndị ọzọ dị na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ruru ụkpụrụ achọrọ maka aha halal.
Enwere m ike ịnọ na Singapore ihe karịrị ụbọchị 90?
Ajụjụ na-adịkarị: Singapore ọ ga-ekwe ka ịbụ nwa amaala abụọ?
Azịza kachasị mma: Vietnam ọ nwere ụgbọ okporo ígwè?
Ajụjụ: Olee oge kacha mma ịga Mianmaa?
Ajụjụ gị: Kedu ihe ụgbọ elu Philippine na-enye?
Ajụjụ a na-ajụkarị: Ọ̀ bụ ọla kọpa ka e ji mee mkpụrụ ego Philippine?
Ajụjụ gị: Gịnị kpatara na ịzụ ụgbọ ala na Singapore ji dị oke ọnụ?